China Fish Collagen Peptides ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Ama-peptide ama-fish collagenzikhishwa ezinhlanzini zasolwandle. Ayinakho ukungcoliswa okunambitheka okuhle, futhi umphumela wayo ubonakala kakhulu. Inothile ngokudla okunomsoco futhi inomswakama omkhulu emanzini.
Ama-peptide ama-fish collagen ingabambezela futhi yehlise ukukhiqizwa kwemibimbi yesikhumba, inenzuzo ekukhuleni kwesikhumba, futhi ingalungisa futhi yondle isikhumba, futhi ithuthukise ikhono lamaseli esikhumba ukugcina amanzi, ukuthambisa okuhle nomphumela wokuthambisa esikhunjeni.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi ngisho nokulinganiswa okuphansi kwama-collagen peptides kungasiza ekwandiseni ukuqina kwesikhumba, kunciphise ukuqina nokuqina, izimbotshana zesikhumba ezincane nokuqinisa izinwele.
Enye yezinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze ama-peptide ama-collagen ezinhlanzi abambe iqhaza empilweni yesikhumba ukuthi angabhekiswa ekubhekaneni nezicubu. Kuyaziwa ukuthi i-collagen ivela ngokwemvelo emzimbeni womuntu futhi inokwakheka okuhlukile kwama-amino acid, inani elikhulu lawo kungenza ama-peptide bonds azinzile.Lezi zibopho ziyamelana kakhulu nokuwohloka kohlelo lokugaya ukudla.
Ngakho-ke, lapho uthatha i-collagen peptide ngomlomo, ngaphezu kwama-amino acid wamahhala, ama-peptide amafushane, anebioactive angamunzwa kusuka emathunjini amancane aye egazini. Lawa ma-peptide ayakwazi futhi ukumelana nokuwohloka okuqhubekayo egazini futhi afinyelele ezicutshini ezihambisanayo. kukhonjisiwe ukuthi i-collagen enelebula ecwebezelayo ingasheshe ifinyelele ezicutshini ezihlosiwe ngemuva kokumunzwa, njengethambo, uqwanga, izicubu zemisipha nezicubu zesikhumba. Ngisho nangemva kwezinsuku eziyi-14 zokuphathwa, i-collagen emakiwe ibitholakala esikhunjeni sesikhumba. kulezi zakhiwo nomsebenzi okhethekile webhayoloji, i-collagen ingathuthukisa ukuguga kwesikhumba ngokwandisa ukugcinwa komswakama wesikhumba kanye nobuningi be-collagen ku-dermis, nokunciphisa izingcezu zenethiwekhi ye-collagen ku-dermis.
Ngaphezu kokusiza ukunciphisa ukubonakala kwemibimbi, ama-collagen peptides nawo andisa ubukhulu besikhumba, esihlinzeka ngamandla wenethiwekhi yesikhumba.
Langaphambilini I-Bovine Collagen Peptides
Olandelayo: 2.5g Ishidi leGelatin